ရာဇ၀တ်မှုများ တိုးပွားလာခြင်းကို ထရီနီဒက် မွတ်စလင်များ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရာဇ၀တ်မှုများ တိုးပွားလာခြင်းကို ထရီနီဒက် မွတ်စလင်များ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ
ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၃
ကိုင်ရို။ ။ ကာရစ်ဘီယံကျွန်းစု၏ တောင်ဘက်ပိုင်းကျသော ထရီနီဒက်နိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်များကနိုင်ငံအတွင်း ရာဇ၀တ်မှုများမြင့်တက်လာမှုကို ဆန့်ကျင်သောအနေဖြင့် ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်စွာနေထိုင်ရန် ဘာသာအယူဝါဒ အားလုံးမှ ဘာသာဝင်များကို ဆော်သြခဲ့ကြသည်။
“ကောင်းမှုတွေကို ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်ဖို့နဲ့ မကောင်းမှုတွေ၊ အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေမှာ မပါဝင်ဖို့ အစ္စလာမ်က သွန်သင်ပါတယ်” ဟု Regional Council of the Anjuman Sunnat-ul Jamaat Association (ASJA) ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Imam Raffaic Mohamed က ထရီနီဒက်ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာသို့ ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းရှိ မွတ်စလင်များသည် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ၁၀ခုတွင် စုဝေးခဲ့ပြီး San Fernando မြို့ Mucurapo လမ်းရှိ Jama ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှ စတင် ချီတက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ရာဇ၀တ်မှုများ တိုးပွားလာခြင်းကို သတိပေးရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု Mohamed က ဆိုသည်။ ပိုမိုလုံခြုံသောနိုင်ငံဖြစ်လာရန်နှင့်၊ ရာဇ၀တ်မှုများကို ကိုင်တွယ်အရေးယူရန် မည်သည့်ဆောက်ရွက်မှုမျိုးကိုမဆို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟုလည်း Mohamed က ထပ်လောင်း ပြောကြားသွားသည်။
“ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ရပ်တန့်စေဖို့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်မှုမျိုးကိုမဆို ကျနော် အားပေးပါတယ်။” ဟု သူက ဆိုသည်။
ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂိုနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်း ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများမှာ ယခင်ကတည်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသည်။
ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းများ၏ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုများမှာ ၁၉၉၉ နှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ် တိုးပွားလျက်ရှိပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၅၅၈ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရကာ တစ်နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံး ပမာဏဖြစ်ခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ကမူ ရဲအရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ တိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်း၊ CCTV ကင်မရာများ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိုနည်းတူစွာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပညာရှင်များအား ငှားရမ်းအသုံးပြုခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာ ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂိုနိုင်ငံရှိ အခြား ဘာသာဝင်အုပ်စုများအတွက် နမူနာတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ရာဇ၀တ်မှုများကို ထိန်းချုပ်ရာ၌ အကူအညီပေးရန် ဆော်သြမှုတစ်ခုအဖြစ် မွတ်စလင်များက စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဘာသာတရားအားလုံးက ခေါင်းဆောင်တွေ အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့အားလုံး အချင်းချင်း နားလည်မှုရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။” ဟု ASJA ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Mohamed က ဆိုသည်။
ကာရစ်ဘီယံကျွန်းအတွင်း ရာဇ၀တ်မှုများ တိုးပွားလာခြင်းက လူအများကို ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
ရာဇ၀တ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခြင်းဟာ လူသားအားလုံအတွက်ကောင်းတဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ် ကျနော်တို့အနေနဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ သြဇာ သက်ရောက်မှုရှိရမယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်နဲ့အညီ ကျနော်တို့ နေထိုင်သွားရမယ်” ဟု သူကပြောကြားခဲ့သည်။
ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂိုနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၃ သန်း၏ ၅ ဒဿမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်။
Ref : http://www.onislam.net
This entry was posted on January 26, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် (၁၁၅) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားမှ ပြန့်လွင့်လာသည့် အသံများ
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော် အာဂုံဆောင် တရုတ် မွတ်စလင်မ် အမျိုးသမီးငယ်များ →